देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरासहित ११ जिल्लाका सिडिओ फेरिए, को कहाँ पुगे ? — Sanchar Kendra
देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरासहित ११ जिल्लाका सिडिओ फेरिए, को कहाँ पुगे ?
काठमाडाैं । सरकारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरासहित ११ जिल्लाका सीडीओ हेरफेर गरेको छ । गृहले हाल मन्त्रालयमा कार्यरत २ सहसचिव र ५ उपसचिवसहित १६ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको हो ।
टिकापुरको इलाका प्रशासन कार्यालयमा कार्यरत उपसचिव मोहनराज जोशीलाई देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा सीडीओ बनाएर पठाइएको छ । डडेलधुराका सीडीओ रहेका हरिप्रसाद घिमिरेलाई गृह मन्त्रालयमा तानिएको छ ।
मन्त्रालयले सहसचिव कमलराज ढकाललाई भोजपुर र सहसचिव जयनारायण आचार्यलाई कास्कीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएर पठाएको छ । कास्कीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका थानेश्वर गौतम ७ महिना पनि नपुग्दै गृह मन्त्रालय तानिएका छन् ।
लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमप्रसाद लुईँटेल, डडेलधुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरे र रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इश्वरीप्रसाद ढकाल गृह मन्त्रालय तानिएका छन् ।
यस्तै, गृहले इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रनिगाहापुरका उपसचिव डोरेन्द्र निरौलालाई जगन्नाथदेवल काठमाडौंको जेलर बनाएको छ ।